Mixels Fang Gang - Online
နေအိမ် » ကာကွယ်မှု » Mixels Fang Gang
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Mixels Fang Gang
အခမဲ့ Mixels ဂိမ်း Play, ဖန်ဂန်ဂိမ်းနှင့်အခြားအကြီးအ Mixels အားကစားပြိုင်ပွဲ
ကစား: 23,199 tag ကို: Mixels, Mixels အားကစားပြိုင်ပွဲ, Fang Gang, Fang Gang games, ကာတွန်းကွန်ယက်ကိုဂိမ်း, ကာတွန်းဂိမ်း
အခမဲ့ဘင် 10 Omniverse ဂိမ်း Omniverse စုစည်းမှုနှင့်အခြားဘင် 10 Omniverse ဂိမ်း Play ။
ဒဏ္ဍာရီတိုက်လေယာဉ်၏ 3-ရှုထောင်ဂိမ်း။ ဂိမ်းမှာတော့ဇာတ်ကောင်ပင့်ကူလူသားအဖြစ်လူသိများကြသည်။ သင်ကစားပွဲမစတင်မီအဆိုပါဂိမ်းကိုထိန်းချုပ်ခလုတ်များကိုသတ်မှတ်နေကြသည်။2ကလူဂိမ်း2player ကိုဆော့ကစားရန်အဘို့အအပိုင်းမှာရှေးခယျြဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အားကြီးသော magiswords ဂိမ်း - မှန်သည်ရဲတိုက်၌နှစ်ဆဒုက္ခ
ကူညီပါ!!! Prohyas သည်သူ၏ဆိုးယုတ်သော Doppelganger Nohyas နှင့်အတူကြေးမုံရဲတိုက်ထဲမှာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ် !!! , တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးဇာတ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့မျဉ်းပြိုင်အတိုင်းအတာအတွက်အသီးအသီးကို၎င်း, သူတို့လာမယ့်အဆင့်အထိရရှိရန်ပေါ်တယ်မှာပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဒီလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးရန်
အသေအချာမသိပြပွဲဂိမ်း - clubber ရဲ့စကားများရန်ဖြစ်
အနီရောင်-မုတ်ဆိတ် Caveman ရိုင်းသွား၏! သူ့ကိုသို့အချို့သောအသိခေါက်မှပြန်ကလပ်အသင်းထိသွားတယ်! အခမဲ့အသေအချာမသိပြရန်ဂိမ်း Play - Clubber ရဲ့ရန်တွေ့ဂိမ်း။
အ powerpuff မိန်းကလေးချို့ယွင်း fixers
သင့်ရဲ့အ PowerPuff မိန်းကလေးများဆက်ကြောင်း Fixers အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက် Share!
အ powerpuff မိန်းကလေးဂိမ်း - နံနက်ရောနှောတက်
နေ့အဘို့အဆင်သင့်ရပါမောက္ခ Utonium ရဲ့တီထွင်မှုအဆင်ပြေထုတ်ကိုဖွင့်ပါစေရန်အ sequence ကိုအလွတ်ကျက်မှတ်!
Powerpuff မိန်းကလေးများဂိမ်းများနှင့်အတူပျော်စရာ Get က The Powerpuff မိန်းကလေးများဂိမ်းမျှဝေ - နံနက်ပိုင်းရောသမ Up ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများရန်။
အ powerpuff မိန်းကလေးနံနက် mayhem
အဆိုပါ Powerpuff မိန်းကလေးများနိုး! အဲဒီမှာမြို့အတွက်ဒုက္ခရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဘိန်းဖြူအချို့ပိတ်ထား-မျက်စိဖမ်းကြသည်။ အကြွပ်များအားပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏နှိုးစက်သို့ Blossom, Bubble နှင့် Buttercup တိုက်ရိုက်နှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ် neme ပယ်ရင်ဆိုင်ဖို့တံခါးကိုထဲကသူတို့ကိုရ
အသစ်စွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်းဖင်လန် & အရိုးအတွက်မရဏာနိုင်ငံအတွင်းကဖွင့်မွှေ!
သမိုင်းထဲမှာ awesomest စစ်တိုက် clarence
Clarence ဂိမ်း - သမိုင်းအတွက် Awesomest တိုက်ပွဲ။ Clarence သူအတန်းထဲတွင်ဆောက်သွားတတ်ကြသည်အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးနောက်အားလုံးသူ၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူတစ်အကြီးစားဟန်ဆောင်စစ်တိုက်ရှိသည်ဖို့လိုလားဆုံးဖြတ်သည်။ သူကပျော်စရာအုပ်စုများတယောက်ဖြစ်ခြင်းဆောက်သွားတတ်ကြသည်နှင့်အခြားသို့လူထခွဲထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ် <
ဟူ. အမည်ပေးထားပြီး: တံခါးကိုစစ်ဆင်ရေးလာမည့်လေးတွေသုည outnumbuh'd
ဟယ်လိုဂိမ်း - စစ်ဆင်ရေး ZERO: zombified KND လုပ်ငန်းတစ်ခုတပ်မတော်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Fight Outnumbuh'd ။ ဟူ. အမည်ပေးထားပြီး: ကလေးများ Next Door အစစ်ဆင်ရေး ZERO Outnumbuh'd
အားကြီးသော magiswords: hoversword Hustle
Hoversword Hustle အရှိဆုံး Magiswords စုဆောင်းဖို့ရိုင်း Quest များတစ်စီးရီးအပေါ် Prohyas နှင့် Vambre ပါရှိပါတယ်။ , အရစ်ကျများအတွက်စစ်သည်များ၏တစ်ခုခုအဖြစ်ကစားရန်ရွေးချယ်သင့်ရဲ့ hoversword အပေါ်ခုန်, သင်သည်စိန်ခေါ်မှုတက်နေလျှင်ကြည့်ရှုပါ။ ne သော့ဖွင့်ဖို့ Quest များ Beat
သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ဤအလှည်နည်းနည်းတွားသွားသတ္တဝါအဖြစ်အများအပြားဖမ်းရန်သင့် mouse ကိုသုံးပြီး, Clarence, ရိုင်ယန် Sumozski နှင့်ဂျက်ဖ် Rendell အဖြစ် Play ။ ညဉ့်ကိုအစာရှောင်ချဉ်းကပ်သောကြောင့်သို့သော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလုံလောက်တဲ့အိမ်မြှောင်ဖမ်းမထားဘူးဆိုရင်သင်ဖို့ကလုပ်မည်မဟုတ်
powerpuff မိန်းကလေး mayhem mech
အဆိုပါပျက်စီးကြောင်းမင်းသမီး Morbucks တစ်ဦးပြီးနောက်ကျောင်း duel ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်, သူသူ့အဘို့သူမ၏ညစ်ပတ်ပေရေအလုပ်လုပ်ဖို့စက်မှု Android အတွက်တိုက်ပွဲ, ပျံသန်းရာပေါင်းများစွာအပေါ်သူမ၏လက်ကိုလေရဲ့။ သူတို့ကိုစေလွှတ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ, ဒါပေမယ့်စောလွန်းသို့မဟုတ်သိပ်နောက်ကျဖြစ်ဘူး!
Cha-Ching Saver တွေနဲ့ကမ္ဘာလှည့်လည် 2
အဆိုပါ Cha-Ching တီးဝိုင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂီတမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုအောင်နိုင်မှသတ်မှတ်ထားသည်။ Little ကသူတို့သိခဲ့ပါ, မကောင်းတဲ့စိတ်မရှိပါ-Gooders တီးဝိုင်းကသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုဖျက်ဆီးဖို့ထွက်ပါ! အ Cha-Ching တီးဝိုင်းအခြားအံ့မခန်းအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ကူညီပါ! ဒီဂိမ်းကိုသာ desktop ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
Cha-Ching Saver တွေနဲ့
တစ်စုံတစ်ဦးကထို Cha-Ching တီးဝိုင်းမှအပေါငျးတို့သတူရိယာယူထားပါတယ်။ ဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေနဲ့တီးဝိုင်းများအတွက်တူရိယာပြန်ရရှိရန်ဂိမ်း Explore ။ ဒီဂိမ်းကိုသာ desktop ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
oggy နှင့်ပိုးဟပ်ပိုးပာပ်နှင့် craassh ကာတွန်း
Oggy နှင့်ပိုးဟပ်ပိုးဟပ်နှင့် Craassh ကာတွန်း။ Oggy နှင့်ပိုးဟပ်ပြန်မှာများမှာ! နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဟင်းလျာများဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပျက်ကျမှု cacophony အအိပျပျြောဘော့နိုးလိမ့်မည်ကိုဖမ်း။ Oggy နှင့်ပိုးဟပ်, Oggy နှင့်ပိုးဟပ်ဂိမ်းများ, oggy, oggy <
mixels flexers ဂိမ်း
အခမဲ့ Mixels Flexers ဂိမ်းအွန်လိုင်း Play
mixels ဂိမ်း - frosticons ဂိမ်း
အခမဲ့ Mixels ဂိမ်း Play, Frosticons ဂိမ်းနှင့်အခြားအကြီးအ Mixles အားကစားပြိုင်ပွဲ
mixels glorp ကော်ပိုရေးရှင်း
အခမဲ့ Mixels ဂိမ်း Play, Glorp Corp ကဂိမ်းနှင့်အခြားအကြီးအ Mixels အားကစားပြိုင်ပွဲ
mixels ဂိမ်း cragsters
အခမဲ့ Mixels ဂိမ်း, Cragsters ဂိမ်းနှင့်အခြားအကြီးအ Mixels အားကစားပြိုင်ပွဲ Play ။
mixels electroids ဂိမ်း
Mixels Electroids ဂိမ်း။
အခမဲ့ Mixels ဂိမ်း Play, Electroids ဂိမ်းနှင့်အခြားအကြီးအ Mixels အားကစားပြိုင်ပွဲ
Steven ဝဠာကိုဂိမ်း - ဗိမာနျတျောပြောင်းလဲ
စတီဗင်ဠာဂိမ်း Play - ဗိမာနျတျောအခမဲ့အွန်လိုင်းပြောင်းလဲ
စွန့်စားမှုအချိန်ကနေကာတွန်းကွန်ယက်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဂိမ်း Play, Gumball, ဘင် 10, ပုံမှန်ပြသပါ, အဆိုပါ Powerpuff မိန်းကလေးများ, ကျနော်တို့ကိုရှင်းလင်းသောဝံ, ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက, စတီဗင်ဠာ, ဦးလေးအဘိုးနှင့်
အခမဲ့ဦးလေးအဘိုးဂိမ်း Play - ရော့ခ်စက္ကူ Tummy အွန်လိုင်း။
ဦးလေးအဘိုး, ကျောက်ထရံစက္ကူ Tummy, ဦးလေးအဘိုးဂိမ်းများ, ဦးလေး, အဘိုး, ကာတွန်းဂိမ်း, ကာတွန်းကွန်ရက်ကာတွန်းကွန်ယက်ကိုဂိမ်း
အမျက်ဒေါသ၏ gumball ဘီးများအံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ
သင်း ဖွဲ့. ၏လွတ်လပ်သော Gumball ဂိမ်းရထားဘီးအတွက်အရူးနှင့်တူသင်း ဖွဲ့. Drive ကို၏ရထားဘီး! Gumball ရဲ့ mom, အဖြစ်သတ္တုဖို့နင်းထားပါ။ , စီးပေးဖို့အားလုံးကို Elmore ကျော်အရှိန်မြှင်ပီဇာအပ်နှင့်ငွေသားအဘို့အပြေးပြိုင်ပွဲ! အစာရှောင်မောင်းနှင့်ဟုန်းဟုန်းငွေသားဝင်ငွေဖို့နဲ့ Gumbal ပေး
ထိုမြွေ၏မြင့်တက် Fight ။ ဂိမ်း Spinjitzu Snakedown အတွက်! အဆိုပါ Hypnobrai တစ်ဦးရွာတိုက်ခိုက်ကြသည်။ Spinjitzu ၏မာစတာနှင့်အချို့သောအလေးအနက်မြွေအမြီးကန်: Ninjago မှကိုးလ်, ဂျေး, Kai သို့မဟုတ် Zane Choose! Ninja-GO!
အွန်လိုင်းဗိုက်ကင်းစစ်ဆင်ရေးကာကွယ်ရေးဂိမ်းမဟာဗျူဟာဂိမ်း Play ။
ရုပ်တုကိုကာကွယ်ရေးဌာန။ ဘုရားသခငျသညျသူကဖြိုဖျက်ရန်လိုသူလူတို့ထံမှရှင်ပြန်ထမြောက်သောသူ၏ Idol ကာကွယ်ကူညီပါ။ လူထိုသူကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်နိုင်အောင်ဘုရားသခင် Idol ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးနားလည်မှုလွဲလည်းရှိ၏။ အ Id ထိခိုက်စေလိုသောမည်သူမဆိုကိုဖျက်ဆီးဖို့အင်အားကြီးမှော်စာလုံးပေါင်းကိုသုံးပါ
phineas & ferb အိမ်နောက်ဖေးကာကွယ်ရေး
အိမ်နောက်ဖေးကာကွယ်ရေး။ Phineas & Ferb ဖုတ်ကောင်ကနေအိမ်နောက်ဖေးကာကွယ်ကူညီပါ!
သငျသညျတပြင်လုံးကိုနိုငျငံတျော၌အကောင်းဆုံးစစ်သားဖြစ်ကြောင်းပြရန်နှင့်ရှင်ဘုရင်၏နာမ၌မစ်ရှင်အပေါ်သွားပါ။ သင့်ရဲ့မစ်ရှင်နှောင့်အယှက်ရန်သင့်လမ်းလာလတံ့သောမိကျောင်းနှင့် Barbarians ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။
အ gamma မိကျောင်း vs. Avengers သေစားသေစေသော: မြေကြီးတပြင်ရဲ့ယောကျတို့သညျထိုသို့သူရဲကောင်းများ
Gamma Monsters vs. အဆိုပါ Avengers အဆိုပါ Avengers: ကမ္ဘာမြေရဲ့ယောကျတို့သညျထိုသို့သူရဲကောင်းများ။
Gamma Monsters တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ SHIELD ဌာနချုပ်ခုခံကာကွယ်!
အာကာသမှတဆင့်ပျံသန်းနေစဉ်, the Guardians ချုံခိုတိုက်ခိုက်ကြသည်! စတား-သခင်နှင့်ဒုံးပျံရှေ့ပြေးအ Milano ကိုကူညီပါခြင်းနှင့်ရန်သူသင်္ဘောများကိုဖကျြဆီး, ပြီးတော့ဦးခေါင်းကို-to-ဦးခေါင်းကိုတိုက်ပွဲများအတွက် Groot, Drax နှင့် Gamora ရှုံးနိမ့် Korath, Nebula နှင့် Ronan ကိုကူညီပေးပါတယ်။ က Galaxy Defen ၏အုပ်ထိန်းသူများ
chima ၏ဒဏ္ဍာရီ: chima ကာကွယ်ရေး
Chima ၏ဒဏ္ဍာရီ: Chima ကာကွယ်ရေး။ Chima ဂိမ်းနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်!
Batman gotham ကာကွယ်
လူကြမ်းအဖြစ်၏ Gotham City ကို၏မြို့ကိုကယ်တင်ဖို့ Bat Man ကိုကူညီပါ။ Rummage အဓားပြများ၏ search အတွက်မြို့ပတ်လည်နှင့်သူတို့အရမ်းထိပုံပျေါလွင်ပါဘူးအခါ, Batman အားလုံးရာဇဝတ်မှုမြို့အဆုံးသတ်ထားရန်သူတို့ကိုမှုတ်
မိကျောင်းသမုဒ္ဒရာထဲတိုက်ခိုက်သောကြောင့်, ဒီဂိမ်းထဲမှာ, SpongeBob နှင့် seahorses သမုဒ္ဒရာကာကွယ်ပေးသည်။ သမုဒ္ဒရာထဲသို့ရဖို့မဟုတ်, SpongeBob နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများမိကျောင်းရိုက်ကူးကူညီပါ
မြစ်တိရိစ္ဆာန်များသည်သင်၏အခန်းဖို့ဆီသို့ဦးတည်ပြေး mad.Some ဖုတ်ကောင်ဝံသွားပြီ, ညစ်ညမ်းခဲ့သည်။ Away သွားပါငါ့အိမ်ကိုနီးစပ်ရမနေပါနဲ့! သင့်ရဲ့လက်နက်တွေတက် Pick, သင့်အခန်းနှင့်နီးစပ်သောအဖုတ်ကောင်ဝံရပ်တန့်! သင့်ရဲ့လက်နက်တွေအဆင့်မြှင့်တင်ရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်!
တိုးနှင့်အောင်နိုင်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားဒေသများ, အနီရောင် Ninja နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အင်အားကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သူတို့ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက်ရန်သူနယ်မြေစိုးမိုးဖို့ဒီနင်ဂျာရွှေကိုထောကျပံ့
Bart Simpsons ကာကွယ်ရေး
Bart ရန်သူကသူ့ခြေရင်းတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ Bart သူရတယ်ရှိသမျှကိုအင်အားသုံးသုံးပြီးသူတို့အားရန်သူကိုကျောရိုက်ကူးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ Bart Bart ကာကွယ်ရေးကိုဖြိုအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ရန်သူပစ်ချကိုကူညီပါ။
Transformers Autobot ညျခိုငျခံ့ LG ကဖြင့်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မုသာရပ်တန့်ဖို့မြို့ကာကွယ်ရပါမည်။
Epic စစ်ပွဲ 3
အက Epic စစ်ပွဲစီးရီး၏ဆုံးမော်ကွန်း entry ကို။ ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တိုင်းအစက်အပြောက်အောငျနိုငျဖို့စစ်တိုက်၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူ။ Build နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်ရဲ့ကုန်းပတ်, တစ်ဗျူဟာဖွဲ့စည်းရန်, သင့်ရဲတိုက်ကိုကာကွယ်ဖို့, သင်၏လမ်းအတွက်မတ်တပ်ရပ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနှိပ်စက်!
ဒီထိပ်တန်းချသေနတ်ပစ်ဂိမ်းမူရင်းတစ်ဦးဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Mecharon ရှင်သန်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရနျသူသသူရဲအပေါင်းတို့သည်လှိုင်းတံပိုးကိုပယ်ကိုတိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရှင်သန်သို့မဟုတ်သေလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ပါ။
တောင်မှနောက်ကျောကိုသူတို့ထူးဆန်းဖုတ်ကောင်ကျခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်အဆိုပါ 60 ၌တည်၏။ မြို့ခုခံကာကွယ်ကိုကူညီပါခြင်းနှင့်အကိုက်ဖို့မကြိုးစား!
ဘင် 10 ဂြိုလ်သားထာဝစဉ်ကာကွယ်ရေး
အဆိုပါအစဉ်အမြဲနိုက်နောက်ကျောရှိအဟောင်းလှည့်ကွက်ကြမည်။ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဘင်, Gwen, နဲ့ Kevin ကိုကူညီပါ။
စူပါမာရီယိုကာကွယ်ရေးစူပါမာရီယိုဂိမ်းအပေါ်တစ်ဦးရဲတိုက်ကာကွယ်ရေးယူသည်။ သင့်အနေဖြင့်ရဲတိုက်မှရတဲ့အထဲကမာရီယိုနှင့် Luigi Clone ၏လှိုင်းတံပိုးကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်စူပါမာရီယိုဂိမ်းထဲမှာရနျသူမြားအပျေါအခွခေံ, လယ်ပြင်ပေါ်သို့အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုထားပါ။ ite ၏အကွာအဝေး
မဟာဗျူဟာကာကွယ်ရေး 3.5 ဂိမ်း
Aquaman သငျသညျလိုအပျ! Aquaman က Black Manta ၏မကောင်းသောအတပ်ဖွဲ့များမှ Atlantis ခုခံကာကွယ်ကိုကူညီပါ။